कस्तो रह्यो यो साताको शेयर बजार, के होला अब?
काठमाडौं, जेठ २५ : गत साता नेप्से परिसूचक १३१९ दशमलव ४७ विन्दुमा खुलेको थियो भने १३१९ दशमलव ९८ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च विन्दु बनाएको थियो। त्यस्तै, ‘इन्ट्राडे’ न्यून विन्दु १२८४ दशमलव ५९ थियो भने बजार पनि सोही विन्दुमा बन्द भएको थियो।
यो अघिल्लो साताभन्दा ३४ दशमलव ८८ अंक अर्थात २ दशमलव ६४ प्रतिशतको गिरावट हो। बजारको न्यून विन्दु र बजार बन्द पनि सोही अंकमा भएकाले यसलाई साधारणतया सकारात्मक मानिँदैन। यो साता चार कारोबार दिनमा २ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख बराबर रकमको कारोबार भएको छ।
विगत एक वर्षदेखि बजारको उतारचढाव कस्तो रह्यो भनि हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो साताको विश्लेषणको निष्कर्ष अनुसार बजार केही सच्चिन सक्ने र अर्को तत्कालीन टेवा १२७० देखि १२८५ को क्षेत्रमा भनिएको थियो। यो साता बजार यही टेवा क्षेत्रमा बन्द भएको छ।
चित्रमा देखिए बमोजिम अघिल्लो साता नेप्सेले सुटिङ्ग स्टार आकृति बनाएपछि यो साता वियरिस मारुबोजु आकृति बनाएको छ। यसले बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ। माथिल्लो प्रवृत्ति रेखालाई नेप्सेले निश्चित रुपमा तोड्न असफल रहेको देखिन्छ। यसले बजारमा हाल क्रेताको चाप कमजोर भएको संकेत गरे पनि २०० एक्पोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)भन्दा बजारको प्रवृत्तिमाथि नै रहेकाले हालसम्म बजार सकारात्मक क्षेत्रमा नै रहेको संकेत गर्दछ।
चित्र नं.२, दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिले गत १ महिनादेखि नेप्से प्रवृत्तिहीन रहेकोमा तीन कारोबार दिनअघि बजारले १३०० को मनोवैज्ञानिक टेवालाई तोडेकाले बजार केही सच्चिरहेको देखिन्छ।
यो साता १४ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)भन्दा नेप्से प्रवृत्ति तल रहेकाले बजार सकारात्मक देखिँदैन। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स ४६ दशमलव ५५ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले बजारमा विक्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ। यो साता चार दिनको मैनबत्तीलाई समग्रमा हेर्ने हो भने वियरिस मारुबोजु आकृति बनाएकाले बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ। परिमाणले विक्रेताको चाप केही कमजोर हुन थालेको संकेत गरेको छ।
हालसम्म नेप्से प्रवृत्तिहरु र सूचकहरुको आधारमा बजार केही सच्चिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा बजारबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्नलाई बजारको प्रवृत्ति र सूचकहरुको सकारात्मक संकेत कुर्नु पर्ने देखिएकाले हाल ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउन उपयुक्त देखिन्छ। हाल बजारको तत्कालीन प्रतिरोध १३०० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, तत्कालीन टेवा १२७० मा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Saturday, 8th June 17:52:59 PM